Wararkii ugu dambeeyey ee Saaka, Paulo Dybala + 44 Milyan oo lagu soo badalanayo Mohamed Salah, Toni Kroos oo 50 Milyan maraya & Xiisah maanta – Puntlandtimes
Wararkii ugu dambeeyey ee Saaka, Paulo Dybala + 44 Milyan oo lagu soo badalanayo Mohamed Salah, Toni Kroos oo 50 Milyan maraya & Xiisah maanta
March 23, 2019 Puntland PL
Manchester United iyo Paris Saint-Germain ayaa labadaba diyaar u ah inay dalab 70 milyan ginni ka gudbiyaan xiddiga England iyo Borussia Dortmund Jadon Sancho. (The Sun)
Barcelona ayaa diyaar u ah inay iska iibiso weeraryahanka reer Brazil Philippe Coutinho haddii ay helaan dalab kor u dhaafaya 90 milyan ginni inkastoo 26 jirkaan uu doonayo inuu sii joogo kooxda La Liga ka ciyaarta. (ESPN)
Juventus ayaa isku diyaarineysa inay u soo bandhigto Liverpool Paulo Dybala iyo lacag kaash ah oo gaareysa 44 milyan ginni si ay u helaan Mohamed Salah. (Daily Mail)
Manchester United ayaa kaliya 50 milyan ginni kula soo wareegi karta xiddiga mudada dheer diirada u saarnaa ee Real Madrid Toni Kroos. ( The Sun)
Kooxda Tottenham ayaa qorsheyneysa inay iska iibiso xagaaga xiddigaha daafaca midig Serge Aurier iyo Kieran Trippier iyadoo Everton ay dooneyso inay dalab 20 milyan ginni ah ka gudbiso daafaca England (The Sun)
Arsenal ayaa ku darsatay liiskooda xiddigaha ay doonayaan xagaaga ciyaaryahanka Cagliari Nicolo Barella iyo xiddiga Milan Franc Kessie si ay u helaan bedelka Aaron Ramsey oo ku biiraya Juventus. (The Sun)
Chelsea ayaan weli u sheegin xiddiga reer Brazil Willian haddii ay doonayaan inay qandaraas cusub ka saxiixaan inkastoo uu galayo sannadkii ugu danbeeyay ee qandaraaskiisa. (The Sun)
Real Madrid ayaa isku diyaarineysa inay bixiyaan 60.5 milyan ginni oo ah lacagta lagu burburin karo da’ yarka reer Brazil Reinier Jesus kaasoo u ciyaara kooxda Flamengo. (The Sun)
Liverpool ayaa si dhow u eegeysa xaalada xiddiga Chelsea Callum Hudson-Odoi kaasoo ay sidoo kale xiiseynayaan Borussia Dortmund iyo Bayern Munich laakiin Chelsea ayaa weli ka caga jiideysa inay ciyaaryahanka ka iibiso koox kula xafiiltameysa Premier League. (Daily Mail)
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa 86 milyan ginni ku dooneysa xiddiga Atletico Madrid Antoine Griezmann haddii Real Madrid ay la wareegto midkood Neymar ama Kylian Mbappe. (Daily Mail)
Manchester United ayaa wadahadalo la bilowday wakiilka tababare Ole Gunnar Solskjaer oo lagu magacaabo Jim Solbakken iyagoo kala hadlaya sidii shaqadiisa joogto looga dhigi lahaa. (Daily Star)
Juventus ayaa beenisay in go’aankii ay ku dooratay inay koobka International Champions Cup ku ciyaaraan Asia halkii ay ku ciyaari lahaayeen Mareykanka ay ugu wacan tahay kiiska kufsiga ah ee loo heysto Cristiano Ronaldo. (The Independent)
Ander Herrera ayaa weli doonaya inuu sii joogo Manchester United inkastoo ay kooxda isku qilaafeen wadahadalka heshiis cusub islamarkaana ay xiiseyneyso kooxda Faransiiska ee PSG. (Daily Telegraph)